musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Aimbove mukuru weGE anonzi CEO weUnical Aviation
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Nguva pfupi yadarika, Mai Green vakashanda seMukuru Mukuru weGE Capital Aviation Services (GECAS) Materials bhizinesi, mukuru wekugovera airframe nechikamu cheinjini.
Unical Aviation Inc. yakazivisa nhasi kuti yagadza Sharon Green seMukuru Mukuru wekambani, kutanga Zvita 1.
Amai Green vachatsiva Platinum Equity Managing Director Dori Konig, uyo ari kushanda se UnicalMutungamiriri wenguva pfupi. Platinum Equity yakawana Unical muna Nyamavhuvhu.
"Kugadzwa uku nderimwe danho rinokosha mukuzvipira kuisa mari mukubudirira kweUnical uye kuwedzera kusimbisa nzvimbo yayo mumusika wepasi rose wepasi," akadaro Mr. Konig. "Sharon ndiye mutungamiri akapupurirwa anoziva indasitiri nevatengi vayo, uye ane rekodhi yakasarudzika yekuburitsa mhedzisiro. Musanganiswa wake wakasarudzika wehunyanzvi hwekutarisira uye hunyanzvi hwesekisheni hunomuita iye akakodzera kukodzera Unical'Chitsauko chinotevera chekukura."
Nguva pfupi yadarika, Ms. Green vakashanda saChief EMukuru weGE Capital Aviation Services (GECAS) Bhizinesi rezvishandiso, mutungamiri wekutanga weairframe uye zvikamu zveinjini. Ms. Green vakabatana neGE muna 2007 uye vakazoshanda seChief Financial Officer uye Chief Operating Officer pa. GECAS. Akamboshanda seChief Financial Officer weThe Memphis Group.
“Ndiri kufara kubatana neUnical panguva inofadza sekambani neindasitiri,” vakadaro Mai Green. “Unical ine mukurumbira wakakodzera semubatsiri akavimbika kune vatengi vendege pasi rese. Sezvo zvifambiso zvendege zvichiramba zvichikwira uye musika wekutakura zvinhu nendege uchiramba uchikura, Unical ine mukana unoshamisa wekuvaka pakubudirira kwayo uye kusvika pakakwirira. "
Yakavambwa muna 1990 uye inotungamirwa muGuta reIndasitiri, CA, Unical Aviation Inc. ine vashandi vanopfuura mazana matatu nemakumi mashanu uye inopa zvikamu zvendege uye zvikamu kune vanopfuura zviuru zviviri nemazana ezviuru vatengi vendege pasi rese kuburikidza netiweki yezvivakwa zvakatsaurirwa muUnited States, Europe neAsia.
Iine zvikamu zvinodarika miriyoni makumi masere neshanu uye anopfuura miriyoni 85 yakasarudzika uye nhamba dzechikamu cheinjini mustock, Unical ndeimwe yevatengesi vakuru vezvinhu zvitsva uye zvakashandiswa zvinogoneka kuindasitiri yepasi rose yemuchadenga. Iyo kambani inopa, inozivisa zvakare uye inotengesa zvikamu zvendege kune ndege dzekutengesa, vanotakura zvinhu, vanotora ndege, uye kugadzirisa kwendege, kugadzirisa uye kugadzirisa (MRO) mabhizinesi. Unical inosanganisirwa yakatwasuka neyakagadziriswa zviteshi, ichipa mukana wekukwikwidza nekukurumidza kumusika sevhisi.
Amai Green vakawana Bachelor of Accountancy kubva kuUniversity of Mississippi uye Master of Business Administration in Finance kubva kuChristian Brothers University.